Others Archives - Page3of 10 - Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle
9.9 Super Sale 2020: The Biggest Online sale from Shop.com.mm that everyone should not miss0282
Usman Ghani September 9, 2020 11:02 am September 9, 2020
Shop.com.mm, the leading online shopping platform in Myanmar, is launching its annual 9.9 Super Sale, featuring exclusive product offers at …
နေ့စဉ်သောက်သုံးနေတဲ့ ကော်ဖီမစ်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာဖူးလား?01498
Usman Ghani September 9, 2020 8:54 am September 10, 2020
Shop မှာ အမျိုးမျိုးသော ကော်ဖီထုတ်တွေကို ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အမျိုးသမီးတွေအတွက် အဆီကျကော်ဖီထုတ်တွေကိုလဲဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီ။ ကော်ဖီများဝယ်ယူရန်‌ 📲 သင့်ဖုန်းထဲမှာ Shop App ရှိရုံနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူဈေးဝယ်နိုင်လို့ ခုပဲ Download လုပ်လိုက်ရအောင် …. To Download Shop …
သင့်ကိုသင်သတိမထားမိတဲ့ နေ့ရက်တိုင်းအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်သုံး လိုအပ်ချက်များ0219
Usman Ghani September 8, 2020 1:03 pm September 10, 2020
‌‌‌ကျောင်းသူ ကျောင်းသား လူကြီးသူမများဟာ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပြီးဆိုဖို့အတွက် လှုပ်ရှားသွားလာနေကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြီးစီးဖို့အတွက်ပဲအာရုံများနေပြီး မိမိကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ဖို့အတွက် မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ တစ်နေ့တာလုပ်ရှားသွားလာနေရပြီးလူတွေနဲ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့အတွက် မိမိကိုယ်ကိုသတိထားတာအကောင်းဆုံးပါ။ ဒါဆိုရင် သင်တို့သတိမေ့နေတာလေးတွေကို ဂရုစိုက်နိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါအချက်လေးတွေနဲ့အတူ သတိပြုနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ …
အိမ်အလုပ်တွေကို အလွယ်တကူပြီးမြောက်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ0286
Usman Ghani September 8, 2020 12:04 pm September 10, 2020
အိမ်ရှင်မတွေ ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ထဲနေတဲ့ သူတွေအတွက် အိမ်ရှင်းရတာနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာနဲ့ အရမ်းကို ပင်ပန်းလွန်းလှပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ မနက်အိမ်ရာထအိမ်အလုပ်လုပ် နေ့လည်ကျပင်ပန်းပြီး အိပ် နိုးလာတော့ ညရောက်သွားတာနဲ့ တစ်နေ့တာ အချိန်တွေဟာ အိမ်အလုပ်အတွက်ပဲပေးနေရသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အိမ်သန့်ရှင်းရေးအတွက် အသုံးဝင်မယ့်အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းတွေဝယ်ထားပေမယ့်လည်း …
Noise-canceling နားကြပ် တွေအကြောင်းလေ့လာရင်း မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေကြည့်ရအောင်…01373
Usman Ghani September 7, 2020 10:47 am September 7, 2020
Shop မှာ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Noise-canceling Headphoneတွေအပြင် အခြားနားကြပ်ပေါင်းများစွာကိုဝယ်လို့ရနေပါပြီ။ Headphoneများကိုဝယ်ယူရန် 📲 သင့်ဖုန်းထဲမှာ Shop App ရှိရုံနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူဈေးဝယ်နိုင်လို့ ခုပဲ Download လုပ်လိုက်ရအောင် …. To Download Shop MM …
Stay Home and Eat what you want: အိမ်မှာနေရင်း လက်မလွှတ်တမ်းစားသုံးသင့်တဲ့ Instant အစားအစာများ0313
Usman Ghani September 4, 2020 8:28 am September 14, 2020
အိမ်မှာနေရင်း ချက်ပြုတ်သောက်စားသောက်ရမှာအဆင်မပြေတဲ့သူတွေရော ညကြီးသန်းခေါင်မှ ဗိုက်ဆာတတ်တဲ့သူတွေအတွက် ဘယ်လိုမျိုး Instant အစားစာတွေကိုစားသုံးသင့်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ များသော အားဖြင့်က Instant အစားစာဆို ခေါက်ဆွဲဘူးတွေပဲပြေးမြင်တတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Instant အစားစာ တွေထဲမှာ အရသာ ကောင်းမွန်ပြီး သင်မသိသေးတာတွေလဲရှိပါသေးတယ်။ self-heating …
Stay Home ကာလမှာ အိမ်မှာနေရင်း ပျင်းမနေဖို့အတွက် ဘယ်လို ပစ္စည်းမျိုးတွေဝယ်ထားသင့်လဲ?0344
Usman Ghani September 2, 2020 7:28 am September 2, 2020
အိမ်မှာနေရင်း အိမ်အလုပ်တွေလုပ်လိုက်ဖုန်းသုံးလိုက်နဲ့ပျင်းနေကြပြီလား? ဒီလို Stay Home ကာလတွေမှာ အပြင်တွေအရမ်းမသွားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီလို အပြင်တွေမသွားရလို့ပျင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပျင်းနေတာတွေကို ပြေပျောက်စေဖို့နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကတော့ ဂိမ်းဆော့တာတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်တာလဲ သင့်ရဲ့ အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးစေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းကစားတာကသင့်ကို …
သင်ဟာ မိတ်ကပ်တွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီမေးခွန်းတွေကိုဖြေကြည့်လိုက်ပါဦး?01955
Usman Ghani August 31, 2020 12:44 pm September 2, 2020
To buy MakeUp 📲 သင့်ဖုန်းထဲမှာ Shop App ရှိရုံနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူဈေးဝယ်နိုင်လို့ ခုပဲ Download လုပ်လိုက်ရအောင် …. To Download Shop MM app Shop app ကို …
ခရီးတွေသွားတဲ့အခါ မိမိနဲ့အတူ မရှိမဖြစ် ယူဆောင်သွားဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများ0294
Usman Ghani August 31, 2020 9:59 am September 2, 2020
PC gamer တွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ0232
Usman Ghani August 25, 2020 11:19 am August 25, 2020
လက်ပတ်နာရီတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေကြည့်လိုက်ပါ!! 1760